Deakin University - Ambony Education in Aostraliana unviersities
Créé : 1974
mpianatra (eo ho eo.) : 51000
Aza adino ny Deakin University hadihadio
Misoratra anarana ao amin'ny Deakin University
Deakin University dia ho an'ny daholobe anjerimanontolo amin'ny eo ho eo 50,644 fianarana ambony mpianatra ao 2014. hampitoerina amin'ny 1974, ny University dia atao hoe araka ny mpitarika ny hetsika Federasiona Aostralia sy ny firenena ny faharoa Praiminisitra, Alfred Deakin. Manana campus in Geelong, Warrnambool sy Burwood, Melbourne sy ny fianarana foibe in Dandenong, Craigieburn sy Werribee, rehetra ao amin'ny fanjakan'i Victoria. Ary tamin'ny fomba ofisialy hampitoerina amin'ny 1974 ny fandehan'ny ny Deakin University Act 1974. Mansion ofStonnington ny fivarotana tezitra fahatezerana-bahoaka araka ny anjara trano izy izay mety ho redevelopment amin'ny alalan'ny fananana mpandraharaha. Deakin dia iray amin'ireo mitombo haingana indrindra Aostralia fikarohana anjerimanontolo. Ny mitambatra fikarohana famatsiam-bola efa nitombo avy A $ 4.5 tapitrisa ao amin'ny 1997 ny A $ 43,4 tapitrisa in 2014.
Amin'ny alalan'ny ny fandaharam-potoana LIVE ny hoavy, Deakin mikendry ny hanangana ny asa amin'ny ho avy, fampiasana ny fahafahana ny taona nomerika mba hihamalalaka ny fidirana amin'ny fanabeazana sy manova ny fiaraha-monina dia manompo.
Deakin manana halaza ho azo idirana, manampy sy sariaka. Izany dia longstanding firaketana an-tsoratra noho ny fampiasana ny fanapahana-lelan-baovao ny teknolojia tena manokana rehefa manome zavatra, na eo amin'ny rahona ny haino aman-jery tao amin'ny Deakin-karena campus, na amin'ny alalan'ny fitambaran'ny ny rahona sy ny oniversite fianarana.
Deakin Maherin'ny 53,000 mpianatra, miaraka amin'ny efa ho ora latsaka fahefany misafidy ny hianatra tanteraka eo amin'ny rahona (-tserasera).
Deakin no nahazo ny 5-kintana ampy amin'ny anjerimanontolo malaza fandaharana fikambanana Quacquarelli Symonds (QS); ny naoty Deakin dia midika izao tontolo izao-kilasy amin'ny malalaka isan-karazany ny faritra, manana fanapahana-sisin'ny fitaovana ary maneran-nalaza noho ny fikarohana sy ny fampianarana.
The 2015 Shanghai Jiao Tong Academic Ranking ny World Anjerimanontolo(ARWU) Deakin University napetraka teo an-tampon'ny 400 oniversite eto amin'izao tontolo izao. Ny fandaharana dia mampitaha ny fiantraikan'ny fikarohana akademika andrim-panjakana an'arivony maneran-tany ary manana fifantohana manokana amin'ny siansa. Fa ny tanora toy ny Deakin oniversite, izay fikarohana manerana feno ny fitsipika isan-karazany, ary manana fifantohana mafy amin'ny fampianarana tsara indrindra, ny fandaharana Deakin taratry ny fanoloran-mitombo mitohy izao tontolo izao nitarika fikarohana.
Deakin laharana 36 ao amin'ny QS laharan'ny 'izao tontolo izao ny anjerimanontolo eo ambany 50 taona.
Deakin izao ao an-tampon'ny 3% izao tontolo izao ny oniversite isaky ny telo iraisam-pirenena lehibe rankingsAcademic Ranking ny World Anjerimanontolo (ARWU), Higher Education Times sy QS World University Rankings.
ao amin'ny 2015 Tsara in Research for Aostralia (ERA) ambony, 89% ny Deakin ny fikarohana teo amin'ny laharana na mihoatra noho ny an'izao tontolo izao fitsipika. Dimy Deakin ny mpikaroka dia tafiditra tao amin'ny Thomson Reuters lisitra isan-taona ny mpikaroka tena voatonona in akademika gazety, laharana an-tampon'ny iray isan-jato ny mpikaroka ao amin'ny saha. Ireo voatanisa ireo mpikaroka: Alfred Deakin Profesora David Crawford, Jo Salmon, Kylie Ball sy Associate Profesora Anna Timperio, rehetra avy amin'ny Deakin ny Centre ho an'ny vatana sy ny Nutrition Research (C-PAN), ary Alfred Deakin Profesora Michael Berk, Tale ao amin'ny Centre for Fanavaozana ara-tsaina sy ara-batana ary Clinical Treatment (Impact).
Deakin Mbola ho sehatra mpitarika ny fahafaham-po nahazo diplaoma, voalohany tao Victoria ny fahenina taona misesy ao amin'ny Australian Graduate Survey (2010-15).
Faculty ny Zavakanto sy Fampianarana
Sekoly eo amin'ny fifandraisana sy ny Creative Arts
Faculty ny Business sy ny Lalàna
Faculty ny Fahasalamana
Sekoly ny Fanatanjahan-tena sy Nutrition Siansa
Sekoly ny Fahasalamana sy ny fampandrosoana ara-tsosialy
Faculty ny Science, Injeniera ary nanorina Tontolo_iainana
Sekoly Teknolojia Fampahalalam-baovao
Sekolin'ny Fiainana Siansa sy ny tontolo iainana
Institute of Koorie Fanabeazana
Deakin ny tantara
Fanitarana ao amin'ny taona 1990
Fanorenana ny University Town
LIVE ny hoavy
Deakin University tamin'ny fomba ofisialy niorina tany 1974 ny fandehan'ny ny Deakin University Act 1974.
Deakin fahefatra i Victoria ny oniversite sy ny toerana voalohany eo amin'ny faritra Victoria; dia atao hoe araka ny mpitarika ny hetsika sy ny federasiona Aostraliana faharoa Aostralia Praiminisitra, Alfred Deakin.
Avy ny fiandohan'ny, Deakin dia miendrika ny kambana tanjona:
ny fifantohana amin'ny faritra Victoria, famoronana oniversite ho an'ny faritra Geelong
ny fanoloran-nihalehibe fidirana amin'ny oniversite fianarana, indrindra amin'ny alalan'ny fandaharanasa fanabeazana lavitra.
Deakin University ny toeram-pianarana voalohany niorina tao Waurn dobo. Ny University no vokatry ny fiombonana eo State College ny Victoria, Geelong (Teachers College Geelong taloha) ary ny Gordon Sekoly Momba ny Teknolojia (ankehitriny ny Gordon Institute ny TAFE).
Deakin mpianatra nisoratra anarana voalohany ao amin'ny dobo Waurn Geelong Campus in 1977.
Deakin dia nampahery ny andianà fanovana mahomby amin'ny mpiara-miasa mafy, tsirairay avy izay nandray anjara be no ho Deakin ny toetra sy ny fomba.
Aostralia fahatelon'ny lanjan'ny rafi-pampianarana nandalo fiovana lehibe manaraka ny 1988 White Paper Higher Education: ny fanambarana politika, Ary nampiditra ny Minisitry ny Fampianarana Asa John Dawkins.
Tahaka ny nataon'ny ankamaroan'ny oniversite Aostraliana tamin'ny fotoana, Deakin nanomboka andianà fanovana. Tsy natambatra tamin'ny Warrnambool Institute of Advanced Education in 1990, Deakin manatanjaka ny toerana ao amin'ny Distrikan'i Victoria Andrefana miaraka amin'ny Warrnambool Campus.
Ny fiombonana amin'ny ankamaroan'ny Victoria College volana Desambra 1991, sy ny campus in Burwood, Rusden sy Toorak, nanome ny vaovao mafy Deakin tanàn-dehibe tao amin'ny Melbourne anatrehan'ny Burwood Campus.
Ireo Deakin University fampitambarana orinasa afaka mitombo betsaka avy amin'ny mpianatra fiombonana mialoha mponina eo ho eo 8,000 in 1990 ho eo ho eo 25,000 fianarana ambony mpianatra ao 1995.
N ny taona 1990, nisy adihevitra be momba ny hanjo an'i Geelong ny manan-tantara, fa efa ratsy be ny Woolstore Dalgety. Naorina tany am-boalohany ho toy woolstores ao amin'ny 1893, dia be dia be ny trano nohavaozina mba hamorona ny maoderina Deakin sy mahatalanjona Geelong drano Campus.
Ianao ve mila Deakin University hadihadio ? Any fanontaniana, fanehoan-kevitra na hevitra
Deakin University ao amin'ny Map
Photos: Deakin University ofisialy Facebook
Deakin University Hevitra
Miaraha mba hiresahana amin'ny Deakin University.